Ahoana ny fambolena sary ao amin'ny Photoshop, mora sy haingana | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Fitaovana famolavolana, Photoshop, Tutorials, maro
Indraindray maka sary izahay ary ny famolavolana dia tsy tonga lafatra araka ny tadiavintsika. Raha misy toerana malalaka ao amin'ity sary ity dia manome vahaolana tsara anao izahay amin'ity lahatsoratra ity: hampianarinay anao ny fomba famolavolana sary amin'ny Photoshop, mora sy haingana Aza dia taraina!
1 Hanokatra sary
2 Fambolena fitaovana ao amin'ny Photoshop
2.1 Aza esorina maharitra ny pixel rehefa mioty Photoshop
2.2 Ahoana ny fambolena sary ao amin'ny Photoshop
2.3 Ahitsy ny sary
2.4 Farito ny refy voafaritra
Tsy maintsy manomboka isika amin'ny fanokafana ny sary tianay hokapaina, azonao atao izany ao amin'ny Tab "file> open" na hisintona fotsiny ilay efijery Photoshop ny sary irina. Nofidiko ity iray ity, ary tsy tokony havelako hifantoka amin'ilay tovovavy ilay tovovavy, fa hokapohiko izy mba ho eo anilan'ny sary izy, manaraka ny fitsipiky ny ampahatelony (avelako ianao ity rohy ity lahatsoratra iray raha tsy fantatrao izany dia hanampy anao hamorona endrika kokoa ny volanao).
Fambolena fitaovana ao amin'ny Photoshop
Ny zavatra manaraka dia ny fitadiavana ilay fitaovana fanaovana clipping, azonao alaina ao amin'ny baraovana, Notondroiko taminao mena ity, amin'ny sary etsy ambony. Andao hofantarintsika ity fitaovana ity!
Aza esorina maharitra ny pixel rehefa mioty Photoshop
Tsindrio ny fitaovam-pambolena ary jereo ny baran'ny safidy ho an'ny fitaovana. Misy safidy iray milaza izany "Esory ny piksela", raha voamarina ilay boaty dia zava-dehibe ny hahafoana izany. Raha tsy ataonao, rehefa cropping, ny ampahany amin'ilay sary nesorinao dia ho voafafa mandrakizay ary tsy ho azonao intsony (raha tsy omenao ny famongorana azy, miaraka amin'ny baiko na fanaraha-maso + Z, mandra-pahatonganao mankanesa amin'io dingana io). Raha tokony hisintona ianao dia afaka manamboatra azy io tsy misy olana.
Manangona sary ao amin'ny Photoshop mila misintona ny sisin-tany manodidina azy fotsiny ianao. Araka ny hitanao, rehefa manindry ilay fitaovana ianao dia miseho ho azy ny takelaka iray izay ho mpitari-dalana. Raha te-hanangona ny sary ianao nefa tsy very ny refy tany am-boalohany, Vakio amin'ny fisarihana ny zoron'ny sary ary atsaharo ny bokotra "shift".
Ahitsy ny sary
Miaraka amin'ny fitaovan'ny vokatra dia azonao atao koa izany ahitsy ny sary ao amin'ny Photoshop. Tsy maintsy apetrakao eo amin'ny zorony fotsiny ny kôktera dia hiova izy io zana-tsipika miolakaRaha mamindra azy ianao dia afaka mihodina ny sary ary miorina amin'ny tsipika izay miseho ho azy dia azonao ahitsy.
Farito ny refy voafaritra
Azonao atao ny manangona ny sary mba hifanaraka habe manokana. Fisafidianana ny fitaovan'ny vokatraAo amin'ny bara safidin'ny fitaovana dia manana boaty iray ahafahanao mametraka ny habeny tadiavinao. Ohatra, afaka mamorona sary toradroa isika mba hifanaraka amin'ny fahana Instagram (1080 x 1080 px). Tsindrio eo amin'ny boaty, omeo fehezam-bidy vaovao ary ampidiro ny refy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fambolena sary amin'ny Photoshop, mora sy haingana